Wararka | Warmaalnews.com | Page 17
Daawo :- Wareysi Laga Qaadey Wasiirka Maaliyada Dalka Itoobiya
Fanaanka Nimcaan Hillaac oo xil cusub loo magacaabay
Muqdisho (warmaal news) – Fanaanka weyn Nimcaan C/raxmaan Hillaac ayaa maanta loo magacaabay xil cusub, kadib wareegto kasoo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Maareeye. Wareegtada ayaa Nimcaan C/raxmaan loogu magacaabay Agaasimaha wax soo saarka iyo howl gelinta Hoballada Waaberi, waxaana xilkaasi laga qaaday Maxamed Xasan Barrow. Wareegtada kasoo baxday Xafiiska Wasiirka Warfaafinta oo xilka looga qaaday Agaasimihii hore ...
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qadar ayaa ku baaqay dadaal albaabada loogu furayo wadahadalo u dhaxeeya dalalka Iiraan iyo Mareykanka. Sheekh Maxammed binu Abdulraxmaan Al-Thani ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada London in Qadar iyo dalal kale ay labada dhinacba xirir la sameeyeen si xal loogu helo xiisadda sii sii xoogeysaneysa ee gobalka Hadalkaan ayaa imaanaya iyada oo toddobaadkaan lagu wado ...
Nairobi (warmaal news) – Dowladda Kenya ayaa waxaa haatan soo wajahay walaac xoogan oo kaga yimid dhanka Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka Kenya ayaa shaaciyay in ay heleen xog ku aadan in Al-Shabaab ay qorsheynayaan in ay weeraro ka geystaan gudaha dalkaasi. Kenya ayaa hakad galisay dhammaan gaadiidkii ka imaan jiray Mandheera ee u safrayay magaalada caasimada ah ...
Somaliland Oo Shaacisay Xiliga Loo Faadhisan Doono Imataxaanaadka Fasalada Afraad Iyo Sideedaad + [ Muuqaal ]
Al Shabaab oo la wareegay deegaan Muhiim ah oo ku dhow Magaalada Boosaaso
Boosaaso (Caasimada Online)- Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in xubno ka tirsan ururka Al Shabaab ay la wareegeen deegaan muhiim ah oo ku dhow magaalada Boosaaso. Ururka Al Shabaab ayaa baahiyay in xubno iyaga ka tirsan ay la wareegeen deegaan istiraatiiji ah oo hoostaga magaalada Boosaaso, kaasi oo lagu magacaabo degaanka Af Urur. Al Shabaab ayaa baraha Internetka ...
Wararkii ugu dambeeyay Ruux kasoo dhacay dhisme ku yaala degmada Xamarweyne+Sawirro
Muqdisho (Caasimada Online)- Wararka naga soo gaaraya degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in dhaawac halis ah uu soo gaaray ruux kasoo dhacay dabaq (Dhisme dheer) oo ku yaala agagaarka Hotel Muna. Ruuxa kasoo dhacay dabaqa labaad qol uu ka deganaa ayaa la sheegay inuu qarwaayay (riyoonayay) markii uu kasoo dhacay qeybta uu ka deganaa dhismaha ku yaala agagaarka ...